Qoys muddo 6 sano ah Guri ka dhigta Musqul. | HimiloNetwork
Posted by: Himilo in Wararka August 19, 2021	0 85 Views
MUQDISHO (HN) — Saddex sano oo bani aadanka cimrigiisa kamid ah wuxuu ku bixiyaa booqashada suuliga ama musqusha; laakiin, lixdii sano ee lasoo dhaafay waxay hooyadan iyo labadeeda cunug guri ka dhigtaan musqul ama suuli.
Guri aad u jeedaanna wuxuu ahaa walina yahay musqul korka iyo gidaaradda looga deyray dhoobo iyo laamiyeeri.
Dhammaanteen waxaynu dhibsanaa daqiiqadaha kooban oo aan booqashada ku joogno kortagga ama suuliga. Hayeeshe, Joseylne iyo ilmaheedu mahelin doorasho kale oo ka baxsan inay hoy ugu yeeraan musqul lagu saxaroodo.
Mararka qaar waxaynu ka cabanaa alaabo duugay iyo guri dhismihiisa uusan si hagaagsan u sameysneyn iyo wixii la halmaala – innaga oo ogsoon inaan iska beddeli karno. Balse qof kasta uma sahlana doorashada noloshu. Eedna kuma lahan inuu isku maareeyo sida ay u qabato.
Waa dan iyo seeto. Waayaha ayaana ku xirxiray tiirar adag. Dadku waxay kula wiirsadeen nasiibka nolosha uga soo aaday.
In kasta oo musqusha laga hijrooday xilli hore, haddana wixii lagu aasay oo saxaro iyo uskag ah ayaa kusoo gedooma – cayayaanka buuba sida Baranbarada, tuqsigana waxay joog iyo jiif kula hoydaan dhexdeeda. Urtuna ma ahan waxay ka cowdaan. Waa cudurrada faafa ee ka dhalanaya iyo fayadhowr xumida ka jirta iyo dabcan Duumada ama Malaariyada.
Tiiraanyada nolosheedu waxay kasoo bilaabanaysaa markii ay isku dhaceen seygeeda oo qamri-yacab ah kaas oo marwalba oo uu guri yimaado dagaal iyo rabsho ku furi jiray ilaa markii dambe ay jaarkeeda ku amreen inay ka ag guurto.
Helid la’aanta cid ay ciirsato iyo culeys dheer kaddib, waxay heshay Musqul in dhawaalaba aan la adeegsan. Wayna ku qasbanaatay inay degto. Carruurteedu wali waxay aadan iskuulka laakiin sidii hore ash kuma ahan wax-barashada. Waxayna xumaato u dareemayaan sida ay ku nool yihiin. Mana u furfuran ardayda kale. Qosol iyo qaraaxana warkiisa daa.
Iyaduna waxay beeraha u lintaa ama u fashaa beeraleyda. Waana halka uu kaga soo xeroodo dakhliga ay reerkeeda ku maareyso. Samata-baxa noloshuna uma sahlana. Hayeeshe ugu yaraan waxay ku mahdinaysaa inay heshay hoy ay qabowga iyo qoraxda ka gasho – xattaa haddii taasi ay ka dhigan tahay Musqul inay ku hoyato.
Previous: Sababta uu Wiil mar kaliya uu laba Gabdhood u guursaday!
Next: Maalinta Caalamiga ee Bani-aadanimada.
Daawo: Haweeneydii la furay 10 jeer ku dhawaad.
Boqor Muslim ah oo noqday ninkii ugu taajirsanaa ee abid soo maray dunida.
Maxaad ka taqaan taariikhda laacibkii xulka qaranka ee Mukhtaar Cuti?!